Israeri anosvika pagungwa (1-4)
Farao anotevera Israeri (5-14)
Israeri anoyambuka Gungwa Dzvuku (15-25)
VaIjipiti vanonyura mugungwa (26-28)
Israeri anotenda muna Jehovha (29-31)
14 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 2 “Udza vaIsraeri kuti vanofanira kudzoka vodzika musasa pakatarisana nePihahiroti, pakati peMigdhori negungwa, vachikwanisa kuona Bhaari-zefoni.+ Mudzike musasa pedyo negungwa makaitarisa. 3 Farao achabva ati nezvevaIsraeri, ‘Vava kungodzungaira nenyika. Vava kushaya kwekuenda murenje.’ 4 Ndicharega mwoyo waFarao uchioma,+ uye achavatevera, uye ndichaita kuti ndikudzwe nezvichaitika kuna Farao nemauto ake ese;+ uye vaIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha.”+ Saka vaIsraeri vakaita saizvozvo. 5 Mambo weIjipiti akazoudzwa kuti vanhu vakanga vatiza. Farao nevashandi vake vakabva vachinja mwoyo pamusoro pevanhu vacho,+ uye vakati: “Takaiteiko nhai, kurega varanda vedu vaIsraeri vachienda?” 6 Saka akagadzirira ngoro dzake dzehondo, akaenda nevanhu vake.+ 7 Akatora ngoro dzehondo 600 dzakanga dzanyatsosarudzwa, nedzimwe ngoro dzese dzeIjipiti, imwe neimwe iine varwi. 8 Saka Jehovha akarega mwoyo waFarao mambo weIjipiti uchioma, uye akatevera vaIsraeri pavakanga vachibuda nechivimbo.*+ 9 VaIjipiti vakavatevera,+ vaine ngoro dzese dzemabhiza dzaFarao, nemauto ake, nevarwi vake vakanga vakatasva mabhiza uye vakanga vava kutovabata pavakanga vakadzika musasa pedyo negungwa, paPihahiroti, pakatarisana neBhaari-zefoni. 10 Farao paakanga ava pedyo, vaIsraeri vakasimudza misoro, vakaona vaIjipiti vachivatevera. VaIsraeri vakatanga kutya, vakatanga kuchemera Jehovha.+ 11 Vakati kuna Mozisi: “MuIjipiti makanga musina makuva here zvamakatiunza kuno kuti tifire murenje?+ Makazviitirei? Makatibudisirei muIjipiti? 12 Izvi handizvo here zvatakakuudzai tiri muIjipiti, patakati, ‘Tisiyei hedu tichishandira vaIjipiti’? Nekuti zviri nani kuti tishandire hedu vaIjipiti, pane kufira murenje.”+ 13 Mozisi akabva ati kuvanhu vacho: “Musatya henyu.+ Mirai makasimba muone ruponeso rwaJehovha rwaachakuitirai nhasi.+ Nekuti vaIjipiti ava vamuri kuona nhasi, hamuzombovaoni zvakare.+ 14 Jehovha pachake ndiye achakurwirai,+ uye imi muchange makanyarara.” 15 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Uri kurambirei uchindichemera? Udza vaIsraeri kuti vaputse musasa. 16 Asi iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pagungwa urikamure, kuti vaIsraeri vapfuure nepakati pegungwa panyika yakaoma. 17 Kana ndiri ini, ndiri kurega mwoyo yevaIjipiti ichioma, zvekuti vachavatevera; saka ndichaita kuti ndikudzwe nezvichaitika kuna Farao nemauto ake ese, kungoro dzake dzehondo, nekuvarwi vake vakatasva mabhiza.+ 18 Uye vaIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha pandichaita kuti ndikudzwe nezvichaitika kuna Farao, kungoro dzake dzehondo, nekuvarwi vake vakatasva mabhiza.”+ 19 Ngirozi yaMwari wechokwadi+ yakanga ichitungamirira ungano yevaIsraeri yakabva ikaenda shure kwavo, uye shongwe yegore yaiva kumberi kwavo yakabva ikaenda kunomira shure kwavo.+ 20 Saka yakapinda pakati pemusasa wevaIjipiti nemusasa waIsraeri.+ Kune rumwe rutivi yaiva gore dema. Kune rumwe rutivi yaivheneka usiku.+ Saka hapana vakaswedera kwaiva nevamwe usiku hwese. 21 Mozisi akabva atambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa;+ uye Jehovha akadzorera shure gungwa achishandisa mhepo yekumabvazuva ine simba usiku hwese, achiita kuti pasi pegungwa pachinje kuva nyika yakaoma,+ uye mvura yakakamurwa.+ 22 Saka vaIsraeri vakapfuura nepakati pegungwa panyika yakaoma,+ uye mvura yakanga yakaita semadziro kuruoko rwavo rwerudyi nekuruboshwe kwavo.+ 23 VaIjipiti vakavatevera, uye mabhiza ese aFarao, ngoro dzake dzehondo, nevarwi vake vakanga vakatasva mabhiza, vakatanga kuvatevera pakati pegungwa.+ 24 Panguva yekurinda kwemangwanani* Jehovha akatarisa vaIjipiti ari mushongwe yemoto negore,+ akavhiringidza vaIjipiti. 25 Akaramba achigurunura mavhiri engoro dzavo zvekuti vakanga vava kunetseka kudzifambisa, uye vaIjipiti vaiti: “Ngatitizei vaIsraeri, nekuti Jehovha ari kuvarwira achirwisana nesu vaIjipiti.”+ 26 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Tambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa, kuti mvura idzoke pamusoro pevaIjipiti, pangoro dzavo dzehondo, nepavarwi vavo vakatasva mabhiza.” 27 Mozisi akabva angotambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, uye kwava kuedza gungwa rakatanga kudzokera pane zvarakanga rakaita. VaIjipiti pavaitiza, Jehovha akavazunzira mukati megungwa.+ 28 Mvura yaidzokera yakafukidza ngoro dzehondo, nemauto ese aFarao nevarwi vakanga vakatasva mabhiza vakanga vapinda mugungwa vachivatevera.+ Hapana kana mumwe chete wavo akapona.+ 29 Asi vaIsraeri vakafamba panyika yakaoma pakati pegungwa,+ uye mvura yakanga yakaita semadziro kuruoko rwavo rwerudyi nekuruboshwe kwavo.+ 30 Saka Jehovha akaponesa Israeri paruoko rwevaIjipiti pazuva iroro,+ uye Israeri akaona zvitunha zvevaIjipiti pamhenderekedzo yegungwa. 31 Israeri akaonawo simba guru rakanga rashandiswa naJehovha pakurwisa vaIjipiti, uye vanhu vakatanga kutya Jehovha, uye vakava nekutenda muna Jehovha naMozisi mushumiri wake.+
^ Kureva, kuma2:00 dzeusiku kusvika kuma6:00 dzemangwanani.